Maxaa ka jira in Kooxda Real Madrid ay gashay heshiis qarsoodi ah oo ay kula soo wareegeyso Lautaro Martinez!? – Gool FM
(Madrid) 14 Sebt 2020. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ku biirista Lautaro Martinez ee Kooxda Real Madrid, taasoo la warinayo in saxiixa weeraryahankan ay ku garaacayso naadiga Barcelona.
Real Madrid ayaa ogolaatay heshiiska ay kula soo saxiixanayso Lautaro Martínez oo ay kaga soo qaadanayso kooxda Inter Milan sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Talyaaniga, laakiin ilo wareedyo ku dhow Los Blancos ayaa beeninaya warkaaas.
Real Madrid ayaa la sheegayaa inay qarka u saaran tahay inay la saxiixato Weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo dalka Talyaaniga.
Ku biirista Martínez ee Kooxda Real Madrid ayaa si qarsoodi ah loogu ogolaaday, sida uu warinayo Warsidaha Sport Mediaset.
Sida laga soo xigtay Warsidaha Sport Mediaset, Inter ayaa heshiis la gaartay Madrid kaddib markii ay wadahadallo qarsoodi ah la yeelatay Los Blancos, iyagoo diidaya inay daboolka ka qaadaan wadahadallada si looga fogaado xanaaqa Barcelona oo ka dhigtay Martínez bartilmaameedkeeda ugu weyn.
Maadaama ay Inter wadahadal kula jirto inay soo iibsato ciyaaryahan Arturo Vidal oo ka tirsan Barça, Sport Mediaset ayaa sharraxday inuu jiro walaac ay qabto Nerazzurri oo ah in wadahadallada ay kula jiraan Madrid ee ku saabsan Martínez ay sababi karto in Blaugrana ay ka baxdo heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Chile.
Wargayska ayaa intaas ku daray in Los Blancos ay ogolaatay inay gacanta ku soo dhigto Martínez oo 23 jir ah, qandaraas uu sanadkii ku qaadanayo siddeed milyan oo euro.
Dhinaca kale ilo wareedyo u dhow kooxda Real Madrid ayaa beeniyey sheegashadaas uu Martínez ugu dhaqaaqi karo caasimadda Spain.
Waxa ay ilo wareedyadan ku dhow Real Madrid u sheegeen Jariiradda AS in kooxda ka arrimisa garoonka Bernabéu aysan isku dayaynin saxiixa xiddiga xulka qaranka Argentina.